I-SMOOTH-Q2: I-gimbal enobungakanani bepokotho kaZhiyun ngoku iyafumaneka | Iindaba zeGajethi
U-Eder Esteban | | Izixhobo, elektroniki
Intsimi yegimbal ibikhula kangangexesha elithile ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo. UZhiyun usishiya nenguqulelo yakhe yale mveliso, eyilelwe ukuba sikwazi ukufumana iividiyo ezizinzileyo nezikumgangatho ophezulu. Inkampani iveza i-SMOOTH-Q2 gimbal yayo ngokusemthethweni, okuya kusinceda xa kufikwa ekurekhodeni iividiyo ezisemgangathweni ngozinzo.
Nangona le SMOOTH-Q2 ikwavelela ubungakanani bayo obuncinci. Ukusukela ukuba ifemi isishiya ngemodeli enobungakanani bepokotho, ukwenza ukusetyenziswa kunye nokuthuthwa kukhululeke ngakumbi kwaye kulula ngalo lonke ixesha. Ke kuninzi lolona khetho lunomdla.
Ngokungafaniyo nezinye iimodeli kwintengiso, le Zhiyun SMOOTH-Q2 sele iza ngobungakanani obuncitshisiweyo. Ke ngoko, akukho mfuneko yokuba siyisonge okanye siyongeze xa siza kuyisebenzisa. Inobude obungama-204 mm, nto leyo eyenza kube lula kakhulu ukuhamba nathi kuyo yonke indawo. Singayiphatha kubhaka ngobumnandi obukhulu. Ukongeza, ukwenziwa ngomzimba wealuminium, yimodeli eqinileyo, kwaye ukutyabeka kwe-silicone kuyenza ibambe xa kufuneka siyisebenzise.
Enye into ebalulekileyo yale gimbal kukuba kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Kuba ineendlela ezininzi zokusetyenziswa, ezihambelana neemeko ezahlukeneyo, kunye singatshintsha phakathi kweendlela nangaliphi na ixesha ngokucinezela iqhosha elinye. Ukongeza, inkampani yazise iindlela ezintsha kule gimbal, ukuze abasebenzisi babe namathuba amaninzi okusetyenziswa. Eyona mowudi intsha yindlela ye-POV, ekuvumela ukuba wenze i-360-degree recording in axes ezintathu, ukuze ube nefuthe lokuntywila.
Sinako Sebenzisa le Zhiyun SMOOTH-Q2 ngeefowuni zombini ze-Android kunye ne-iPhone Ngendlela elula. Iye yahlengahlengiswa ukuze isebenze kakuhle nazo zombini iinkqubo zokusebenza ngoku. Nangona eminye yemisebenzi iya kuxhomekeka kwimodeli ethile, ke kufuneka kusetyenzwe iinkcukacha ezithile, ukuze wazi ukuba zeziphi iindlela okanye imisebenzi enokusetyenziswa kwimeko nganye nale gimbal yomsayino. Ngokubanzi, ayisiyonto inika iingxaki, ke sinokonwabela iindlela kunye nemisebenzi yazo ngokulula.
Ukusetyenziswa kwayo kulula, njengoko besesitshilo, oku kukwabonakaliswa kuyilo. Kule SMOOTH-Q2 sinokubona ngawo onke amaxesha ukuba kulula ukuyibeka kwinkxaso yokuyisebenzisa. Kulula kakhulu nokususa ifowuni xa sigqibile ukusebenzisa i-gimbal nakanjani. Ayizukuthatha nantoni na ukwenza le ntshukumo, ethi ke ibenegalelo ekusetyenzisweni kwayo ngcono kuzo zonke iintlobo zeemeko. Ubunzima obuphezulu obuxhasayo kule meko ziigram ezingama-260, ezingayi kudlulwa ngokwesiqhelo, kuba iifowuni zilula, kodwa kulungile ukwazi ukuba lo ngumda ovumelekileyo gimbal.
Ukongeza, sinako Jikelezisa ngokulula indawo yefowuni kule gimbal. Ngale ndlela, sinokurekhoda zonke iintlobo zeevidiyo, ngokuthe nkqo okanye ngokuthe tye. Kananjalo ukuba sifuna ukurekhoda ngokwethu okanye senze usasazo ngqo sisebenzisa i-gimbal kaZhiyun iyakwenzeka. Into enokuthi ngokungathandabuzekiyo inomdla kubasebenzisi abaninzi, abafuna ukukwazi ukwenza ividiyo ebonakalayo ezinzileyo kwaye ehambelana nomzuzu ngamnye. Enye into ebalulekileyo kule modeli yohlobo lwesiTshayina, ke.
Njengoko ubona, le SMOOTH-Q2 evela kuhlobo lwesiTshayina Inikwe njenge-gimbal epheleleyo neguqukayo, Esiza kuba nakho ukusebenzisa kuzo zonke iimeko zeemeko. Ubungakanani bayo obuncinci kunye nokusebenziseka lula kwenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo lokujonga kweli candelo lentengiso kuninzi. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngale gimbal kunye nendlela onokuyenza ngayo, ngenisa iwebhusayithi yenkampani. Apha uya kufumana yonke idatha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » I-SMOOTH-Q2: I-gimbal yobukhulu bepokotho kaZhiyun